Xisaabaadka Ganacsi ee Halista Sare iyo Kordhinta Kaarka Dibadda
Xisaabaadka Ganacsi ee Badda iyo Nidaamka Kaararka Halista ee Halista Sare
A koontada ganacsatada halista badan inta badan waa a koontada ganacsiga dibedda. Taasi waa, qofku wuxuu adeegsadaa akoon bangi caalami ah si uu u socodsiiyo kaararka deynta oo uu qaato inta soo harta. Qaabkaas, waxaad dakhli ugu abuuri kartaa koontadaada ganacsi ee dibedda. Intaa waxaa sii dheer, bixiyeyaasha akoonnada kaararka amaahda waxay ku calaamadayn karaan qof kasta iyo ku dhawaad ​​urur kasta inuu yahay "halis sare" ganacsi. Markaa, shirkadaha wax samaynaya waxay kaa rabaan inaad dhisto koonto baayac mushtarka ganacsatada.
Shirkadaha kaararka deynta bixiya ayaa tan ku sameeya marxaladda dalabka dhowr arrimood awgood. Tusaale ahaan, waxay uqoran karaan ganacsi leh lacag soo celin sare sida halis sare. Intaa waxaa sii dheer, waxaan aragnay iyagoo diidaya dalabyada sababta oo ah codsadaha ama nooca ganacsiga ma buuxiyo shuruudaha adag ee qoritaanka. Haddii ay sidaas tahay adiga, waxay ku siin kartaa shirkadda kaarka deynta ah ee khatarta sare jawaabta.
Kaarka Deynta Credit iyo Banking Offshore
Markaad la shaqeyneyso bixiye kaararka deynta oo ku takhasusay akoonnada ganacsatada halista badan leh, waxay u badan tahay inay aqbali doonaan dalabkaaga. Caadi ahaan, tani waxay ku lug leedahay bangiga badda iyo koontada ganacsiga dibadda.
Sicirrada Xisaabta Bangiga ee Ganacsiga
Badanaa, ganacsatada halista badan waxay bixin doonaan qiime sare. Si kastaba ha noqotee, waxaan ogaanay inaan badbaadino 98% iibiyaasha khidmadaha ka sarreeya wixii ay haatan la kulmayaan. Tani waa kiiska haddii ay qabaan baahiyo hoose, dhexdhexaad ah ama sare. Ka taxaddar maxaa yeelay waxaa jira bixiyeyaal badan oo si toos ah u oggolaanaya codsadayaasha qandaraas qandaraasyada ah iyo heerar aad u xun. Marka, had iyo jeer hubi heshiiskaaga oo arag haddii ay jiraan heerar lagu yareynayo sicirka macaamilka. Tusaale ahaan, kaydka waaween, heshiisyada keydka ee duudduuban iyo noocyada kale ee yareynta halista waxay ka caawin karaan codsaduhu inuu helo sicirka ugu wanaagsan ee suurtagalka ah.
Miyaan u Baahanahay Koontada Bangiga Dhexe?
Bixiyeyaasha ganacsigu waxay calaamadayn karaan ganacsi sidii qatar weyn oo ay ugu wacan tahay warshadeeda. Mulkiilaha ayaa lahaan kara amaah wanaagsan. Intaa waxaa sii dheer, shirkad ganacsi oo shisheeye oo macaamil ganacsi gudaha Mareykanka ah ayaa lahaan karta meheradda. Haddii kale, badeecada ama adeeggu wuxuu noqon karaa sharci darro sida ku xusan qawaaniinta maxalliga ah, gobolka ama federaalka. Xitaa suuq su'aal la isweydiin karo ama taatikada iibka ah waxay ku dambayn kartaa hoos u dhac. Sidaa darteed, ganacsiyada badan, koonto ganacsi oo ka baxsan xeebta ayaa ah ikhtiyaarka kaliya ee looga baaraandego kaararka deynta internetka. Si aad mid u yeelato, ganacsatada badankood waxay kaaga baahan yihiin inaad ka hesho koonto bangi. Taasoo micnaheedu yahay dejinta shirkad ka socota badda iyo koonto bangi.
Ganacsiyada u Baahan Koontada Ganacsatada Dhulka
Dadka badankood waxay aaminsan yihiin in koontada ganacsiga khatarta sare leh loogu talagalay kaliya casinos internetka ama farmashiyeyaasha. Si kastaba ha noqotee, iyadoo la raacayo tilmaamaha amaahda ee maanta iyo shuruudaha koontooyinka maaliyadeed, noocyo badan oo ganacsi oo lagu kalsoon yahay iyo ganacsiyada khadka tooska ah ayaa ah “khatar sare.” Sidaa darteed, waxay u baahan yihiin processor kaarka deynta gaarka ah. Halkan waxaa ah noocyada ganacsi ee badanaa u baahan xisaabaadka ganacsiga halista badan.
1-800 goobaha lagu sheekeysto
Amazon, Yahoo ama Google Dukaamada
Heshiiska sanadlaha ah
Burburinta, khamaarka ama ciyaaraha
Calaamadee adeegyada lacagta caddaanka ah
Sigaarka ama iibinta elektaroonigga sigaarka ama alaabada nikotiinka
Qadaadiicda, lacagta la uruuriyo ama uruurinta qoraallada
Kuuboonada ama barnaamijka dhibcaha abaalmarinta
Amaah deyn ama deyn bixin iyo latalin amaah
Gadaal toos ah
Sicirada barnaamijyada daryeelka caafimaadka iyo caafimaadka
Isku darka deynta
E-Buugaagta (Qoraallada Qoraaga)
Dood-wadaha tikidhada (kuwa aan diiwaangashaneyn iyo kuwa aan diiwaan-gashaneyn (sida ganacsatada nooca Hubka Hubka ah)
Adeegyada dhoofinta (kuwa aan Maraykanka ahayn)
Boggaga ciyaaraha fanka
Ganacsatada Fiisiyaalka Federaalka (FFL)
Adeegsade dhaqaale, la-talin maaliyadeed ama adeegga wax-ka-beddelka amaahda
La-talin maaliyadeed aan toos ahayn (Tusaale ahaan Lacagta Lacagta ah adigoo hoos u dhigaya Qaybta Korantada.)
Qorsheynta maaliyadda, istaraatiijiyada ama la talinta
"Hesho buugaagta, barnaamijyada, iwm."
Tikidhada celceliska sare
"Sida loo-isticmaalo" nooca bogagga shabakadaha (ie "Baro Sidee-Lacag u Helaa Internetka")
Horoscope, astrology ama adeegyo cilmi nafsi (tus.
Waxyaabaha ama adeegga "Hype"
Hypnotists ama self-hypnosis
Ganacsatada caalamiga ah (kuwa aan saldhig u lahayn Mareykanka)
Gaadiidka caalamiga ah, xamuulka ama soo dejinta / dhoofinta
Istaraatiijiyadda Maalgashiga & Buugaagta Maalgashiga
Adeegyada gudbinta qareenka
Suuq-geynta iyo liisaska
Ururada xubinnimada (ka badan bilaha 12)
Ganacsiyada ku jira faylka ganacsiga ee la joojiyay (liiska TMF)
Suuq-geynta heerarka kala duwan (MLM)
Muusikada, filimka, barnaamijyada muusigga ama faylasha (ie, muusikada daabacaadda, filimada ama software (ie office office))
Muwaadiniinta Mareykanka ah
Dhismaha xeebta. adeegyada aasaasiga ah
Kaar amar ah
Kaararka debitka ee la bixiyo
Adeegyada telefishanka ee xiran ama ka baxsan
Gacan-qabsiyada, saacadaha, muraayadaha, muraayadaha iwm. (garaacis)
Is-difaaca naftiisa, buufinta basbaaska, xajka, iwm.
Goobaha shabakadaha bulshada? Facebook, Twitter, MySpace etc?
Saadaalinta isboortiska ama is-qadashada cayaarta
Qaybta saddexaad ee ganacsiga, ganacsatada fakarka ah (sida hannaanka lacag bixinta, baqaarada kirada fasaxyada)
Wakhti-waqti wadaag ama xayeysiin waqti-wadaag ah
Adeegyada safarka & wakaaladaha safarka
Kirada fasaxa (haddii aysan haysanin hantida uu leeyahay ganacsade)
Faytamiin iyo iibka dheeraadka ah? kaniiniyada cuntada, kiniiniyada dhakhtarku qoro, daawooyinka dheeraadka ah, farmashiyaha
Shirkadaha damaanad qaadka ah ee dheeraadka ah
Hubka nooc kasta ha ahaadee: qoryaha, mindiyaha, qoryaha sawaxanka, ama ammo. Waxay kujirtaa qayb kasta oo hubka ah (tusaale ahaan, badhamada, kiciyaasha, joornaalada, iwm.).
U hoggaansanaanta Canshuuraha
Dabcan, haddii aad leedahay xisaab bangiga badda iyo xisaabta ganacsiga, waxaad u baahan tahay inaad sii wadato canshuurta u hogaansanaanta. Tusaale ahaan, dadka ku nool Mareykanka, Ingiriiska, Kanada, Australia, iyo dalal kale oo badan ayaa canshuurta dakhliga adduunka. Marka, iska hubi inaad ilaalisid tallada cashuurta codka ah ee xirfadleyaasha cashuurta liisanka leh.
Sida loo Sameeyo Xisaab Ganacsi Halista Sare
Markaad aqriso tan kadib, ma u maleyneysaa in koonto ganacsi oo aad u khatar badan uu kugu habboon yahay? Haddii ay sidaas tahay, fadlan isticmaal lambarrada taleefannada ama foomka wadatashiga ee ku yaal boggan. Markaad sidaas sameyso, waxaad la hadli kartaa xirfadle ku siin kara macluumaad dheeraad ah.
<Illaa cutubka 8
Ilaa cutubka 10>